Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအပေါ် အဆိုပြုချက် သုံးခုပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအပေါ် အဆိုပြုချက် သုံးခုပြောကြား
တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာ,
မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဝိုင်းရှေ့တွင် ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသွားသူနှစ်ဦးအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Politics, Law & Military
ပေကျင်း၊မတ် ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက မြန်မာနိုင်ငံတွင် တင်းမာမှုများ လျော့ကျစေရေး ရှေ့ဆက်မည့် အဆိုပြုချက် သုံးခု ကို မတ် ၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပထမအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအနေဖြင့် တည်ငြိမ်မှု နှင့် ငြိမ်သက်မှုကို ထိန်းသိမ်းသွားရန် ၊ အခြေခံဥပဒေ နှင့် တရားဥပဒေမူဘောင်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ကွဲလွဲချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ညှိုနှိုင်းခြင်း လုပ်ဆောင်သွားရန် နှင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် တရုတ်နိုင်ငံက မျှော်လင့်ကြောင်း ဝမ်ရိက ဆိုသည်။
ချက်ချင်း ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန်မှာ နောက်ထပ် ပဋိပက္ခ နှင့် သွေးထွက် သံယိုမှု မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ရန် နှင့် အခြေအနေကို တက်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး အေးငြိမ်းသက်သာအောင် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ နှစ်ပတ်လည်ဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသည် အရှေတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ၏ ပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက် မစွက်ဖက်ခြင်းအခြေခံမူဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မူဝါဒကို ထောက်ခံအားပေးကာ အာဆီယံနည်းလမ်းဖြင့် သဘောတူညီမှုများကို ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရန် ထောက်ခံအားပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာ နှင့် ပြည်သူများ၏ သဘောထားဆန္ဒကို လေးစားလိုက်နာခြင်းပေါ် အခြေခံကာ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့်အတူ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် တင်းမာမှုများ လျော့ကျအောင် အပြုသဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်သွားရန် အသင့်ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တတိယအချက်မှာ ခက်ခဲသောအခြေအနေကိုကျော်ဖြတ်ကာ တရုတ်-မြန်မာ ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြင့် တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ထားရှိသော ၎င်း၏ ကတိကဝတ်များကို တရုတ်နိုင်ငံက အဆုံးရှုံးခံမည်မဟုတ်ကြောင်း နှင့် အခြေအနေများ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေစေကာမူ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ခြင်းကို ပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု မူဝါဒသည် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများစွာနဲ့ အပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဖလှယ်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ် ” ဟု ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ပယ်အသီးသီး၏ တူညီသည့်သဘောထားအမြင်လည်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
BEIJING, March7(Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Sunday put forwardathree-point proposal on de-escalating tensions in Myanmar.
First, China hopes all parties in Myanmar will keep calm and exercise restraint, address their differences through dialogue and consultation within the constitutional and legal framework, and continue to advance the democratic transition, Wang said.
The immediate priority is to prevent further bloodshed and conflict, and ease and cool down the situation as soon as possible, he said atapress conference on the sidelines of China's annual legislative session.
Second, China supports the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to uphold the principles of non-interference in internal affairs and making decisions through consensus, mediate in the ASEAN way and seek common ground.
On the basis of respecting Myanmar's sovereignty and the will of its people, China stands ready to engage and communicate with all relevant parties, and playaconstructive role in easing the tensions in Myanmar, said Wang.
Third, as China and Myanmar areacommunity withashared future through thick and thin, China will not waver in its commitment to advancing China-Myanmar relations, and will not change the course of promoting friendship and cooperation, no matter how the situation evolves, Wang said.
He stressed that China's friendship policy toward Myanmar is for all the people of Myanmar."Over the years, we have maintained friendly exchanges with various political parties in Myanmar, including the National League for Democracy," Wang said, adding that developing friendship with China has also beenaconsensus across all sectors of Myanmar.
Two citizens rideamotorcycle passing an urban statue in Nay Pyi Taw, Myanmar, Feb. 5, 2021. (Xinhua/Zhang Dongqiang